Daaweynta Proton ee loogu talagalay Kansarka Esophageal - Proton California
La Dagaalanka Kansarka Esophageal
Daaweynta Proton ee Kansarka Esophageal
Farsamaynta iskaanka teknoolojiyadda sawir-qaadka qulqulka qallafsan ee California Protons waa qaab aad u sax ah oo lagu daweeyo shucaaca kansarka kaasoo u saamaxaya dhakhaatiirteena inay si aad ah u bartaan bartilmaameedka burooyinka hunguriga leh oo leh shucaac heer sare ah aaggan xasaasiga ah oo adag.
Marka la barbar dhigo daaweynta daweynta ee loo yaqaan 'proton therapy care-therapy' ee daaweynta wadnaha, teknoolojiyadda baarista qalin-jabinta ayaa si sax ah u gaarsiisa daaweynta shucaaca kansarka hunguriga 2 milimitir iyo daryeelka ugu weyn. Waxaan ku weerari karnaa lakabada lakabka waxaanan yareyn karnaa waxyeelada unugyada iyo xubnaha jirka ee caafimaadka qaba. Tani waxay muhiim u tahay bukaanka kansarka hunguriga marka la siiyo sida ugu dhow ee wadnaha iyo sanbabadu ay ugu jiifaan cudurka hunguriga. Qiyaasta shucaaca xad dhaafka ah ee xubnahan xasaasiga ah waxay sababi karaan shucaaca sambabaha, dhibaatooyinka sanbabka, cudurka wadnaha iyo wadne joogsiga. Yaraynta sunta shucaaca la xiriirta waxay sidoo kale kordhineysaa suurtagalnimada in bukaanku ku dhammaystiri karaan daaweyn kala go ’yar ama dib u dhac ah oo yareyneysa waxyeelooyinka shucaaca ee hunguriga.
Kansarka unugyada 'squamous cell', wuxuu ku bilaabmaa guri siman, unugyo dhuuban oo laga helo dahaarka dusha sare ee hunguriga, inta badan qaybaha sare iyo kuwa dhexe
Ka ilaali caloosha, wadnaha, sambabbada iyo laf-dhabarta
Yaree waxyeelada daaweynta, oo ay kujirto xanuun liqitaanka, lallabbo, matag, miisaan lumis, wadna xanuun iyo fuuqbax
Falanqaynta qorsheynta daaweyntu waxay soo jeedinaysaa in qiyaasta shucaaca ee loogu talagalay esophagus oo taa bedelkeeda la gaarsiiyo wadnaha wadada ay aad ugu yar tahay daaweynta proton beam therapy:
Qiyaasta shucaaca ee la gaarsiiyey wadnaha shucaaca raajada1
Qiyaasta shucaaca ee la gaarsiiyo wadnaha iyadoo la isticmaalayo daaweynta proton beam therapy1
Faa'iidooyinka Daaweynta Proton ee Kansarka Esophageal
Daaweynta proton-ka ee horumarsan waxay u oggolaaneysaa dhakhaatiirta inay si aad ah u doortaan shucaac heer sare ah burooyinka burooyinka iyo unugyada kansarka, waxayna yareeyaan qiyaasta unugyada caafimaadka qaba iyo xubnaha muhiimka ah ee ku xeeran. Xaaladaha qaarkood, tan waxaa loo muujiyey inay gaarsiiso heerar ka sarreeya daawaynta shucaaca xitaa marka lagu jiro xaaladaha ugu adag.
Yaraanta shucaaca ee unugyada caafimaadka qaba ee hunguriga cuna waxay si weyn u yareyn karaan dhaawaca wadnaha, sambabbada, caloosha iyo xarkaha laf-dhabarka waxayna yareyn karaan cudurrada wadnaha-iyo sambabbada la xiriira iyo geeri. Tan waxaa ka mid ah yareynta halista ilayska shucaaca, dhibaatooyinka sambabka, cudurka wadnaha iyo wadne joogsiga.
Farsamooyinka takhasuska leh waxaa loo isticmaali karaa daaweynta proton-ka si loogu bar tilmaameedsado burada soo socota leh saxsanaanta farsamo ee weyn. Tani waxay muhiim utahay bukaanka kansarka hunguriga sababta oo ah markasta oo aad neefsato, hungurigaagu wuu dhaqaaqayaa.
Iyada oo ku xidhan marxaladda kansarka hungurigu, daaweynta isku dhafan ee hannaanka endoscopic, qalliinka, kemotherabi iyo shucaac ayaa laga yaabaa in loogu baahdo qaar ka mid ah burooyinka cuncunka. Fursadaha daaweynta ayaa sidoo kale saameyn ku leh nooca kansarka hunguriga, da'da, caafimaadka guud iyo doorbidyada shaqsiyadeed.
Daaweynta daaweynta Proton ee Xarunta Daaweynta Kansarka ee Protons ee ku taal San Diego ayaa laga yaabaa inay bixiso natiijooyin la mid ah kan shucaaca raajada, iyadoo la yareynayo saameynta mustaqbalka ee halista nolosha sida shucaaca pneumonitis, dhibaatooyinka sambabka, cudurka wadnaha iyo wadnaha oo ku dhaca shucaaca. dhaawac wadnaha iyo sambabbada. Waxay sidoo kale yareyn kartaa fursadaha kansarrada sare nolosha dambe sababa la xiriira shucaaca oo yaraada u soo bixista unugyada caafimaadka qaba ee ku xeeran iyo xubnaha.
Daraasadaha Cilmi-baarista ee Taageera Daaweynta Proton-ka ee Kansarka Esophageal
Dawaynta 'protonity-modu therapy therapy' waxay sii yaraynaysaa soo-gaadhista unugyada caadiga ah inta lagu gudajiro daaweyn la taaban karo ee burooyinka hunguriga uur-jiifka ah ee maxalliga ah: daraasad qiyaasta-qiyaasta
Daaweynta loo yaqaan 'proton beam therapy' iyo kiimiko isku daaweynta kansarka hunguriga
Qorshaha daaweynta afar-geesood ee qiyam-ku-saleysan qorshaynta daaweynta ee daaweynta xoogga shucaaca-isku-beddelay iyo daaweynta proton ee kansarka hunguriga hunguriga